पत्थरीको लागी घरायसी औषधी आफ्नै घर मा यस्तो छ, प्रयोग गर्ने तरिका सहित । – Nepal Online Khabar
पत्थरीको लागी घरायसी औषधी आफ्नै घर मा यस्तो छ, प्रयोग गर्ने तरिका सहित ।
April 8, 2021 1292
एजेन्सी : प’त्थरीको लागी अचु’क औ’षधी आफ्नै घर मा यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका सातदिन भित्रै निको हुन्छ । अ’धिकांश मानिसहरमा अहिले प’त्थरीको समस्या देखिने गरेको छ ।
प’त्थरीको समस्या देखिनुको मुख्य कारक खा’नपीन नै हो । खानपीनमा विशेष ध्यान नदिँदा धेरैलाई मि’र्गौलामा प’त्थरीको समस्याले सताउने गर्छ । मृ’गौलामा प’त्थरी भइसकेको छ अथवा हुने जोखिम छ भने प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।
पानी प्रशस्त पिउने गर्नाले प`त्थरी बन्ने खनिज पदार्थ पि`सा`वमार्फत बाहिर जान्छ । गहतलाई कुलथी पनि भनिन्छ । गहत खानाले प’त्थरी फाल्छ भन्ने कुरा अधिकांश नेपालीलाई थाहा भएको कुरा हो । ग’हतको सेवनले कि’ड्नी स्टो`न फाल्दछ । प’त्थरीको उपचार गर्दा हमेसा कडा औ’षधि प्रयोग गरेको पाइन्छ । घ’रेलु औषधिमा गह’त पनि एक हो ।
प’थरीको उपचार गहतले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे जानकारी पाउनु आवश्यक छ । ग’हतमा भिटामिन ए पाइने भएकाले प`त्थरी बन्नबाट रोक्ने काम यसले गर्दछ । हाम्रो विचार सस्तो सुलभ आफ्नै घरमा भएको औषधि नदिएर हामीले महंगो औषधि सेवन गराउदछौं ।
यस्तो छ गहतको दाल खाने तरिका: १। गहतको दाल २५० ग्राम ल्याउनुहोस् । राती ३ लिटर जति पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् र बिहानै हल्का आगोमा ४ घण्टा पकाउनुहोस् र शुद्ध घिउले झान्नु होस् त्यसमा कालो मरिच, सिधेनुन, जीरा, हलेदो हाल्नुहोस् १० एमएम सम्मको प`त्थरी झार्दछ ।
प’त्थरी हुदा के खाने के नखाने:१. प’त्थरी हुँदा गहत, खरबुजो, मूला,अमला, मूंङको दाल, चौलाई भाजी खाने । दैनिक ७,८ गीलास पानी दैनिक पिउनु पर्दछ । पत्थरीमा के नखाने: १.मासको दाल, मेवा, चक्लेट, माछा, मासु, चिया, भेण्टा, टमाटर आदि खानुहुदैन ।
पछिल्लो समय धेरै मानिसमा पत्थरीको समस्या देखिने गरेको छ । हामीले खाने दैनिक खानामा ध्यान नपुर्याउँदा पत्थरी हुने धेरै सम्भावना हुने गर्छ । माछा–मासुजस्ता खाद्यपदार्थ बढी खानाले पि`सा`बमा युरिक ए`सिडको मात्रा बढ्न गई पत्थरी हुने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी कफी, चिसो पदार्थ, चियाजस्ता पेय पदार्थ पिउनाले पिसाबमा क्याल्सियमको मात्रा बढ्न गई मिर्गौलामा पत्थरी हुने गर्दछ । मिर्गौलाको जोडी पिठ्युँको मध्यभागमा करङको ठीक मुनि रहेको हुन्छ । मू`त्रा`शयको प`त्थरी मू`त्रा`शयमा मिनरल्स फिल्टलीकरण हुने कारणले हुन्छ ।
साथै, पि`सा`बमा पानीको मात्रा कम हुँदा पनि प`त्थरीको समस्या देखिन्छ । मिर्गौलामा क्याल्सियम, फोसफेट अक्जालेट र युरिक ए“सिड गरी चार प`त्थरीहरू हुने गर्दछन् । हाम्रा केही गल्ती र लापरबाहीका कारण मिर्गौलामा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।
जंक फुड खानाले, रा`तो मा`सु धेरै सेवन गर्दा मिर्गौलामा प`त्थरी हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी, मोटोपना, मधुमेह, कालेस्ट्रोलले गर्दा मिर्गौलामा प`त्थरीको समस्या बढिरहेको छ । मू`त्र`नलीको रोग, चो“ट, मू´त्र´नलीमा कुनै चोट लागेको छ वा रोग लागेको छ भने पनि त्यसको कारणले पि`सा`ब
बाहिर आउँदैन । यसै कारणबाट पनि प`त्थरी निमार्ण हुन जान्छ । यी लक्षणहरु देखिएमा प`त्थरी भएको अनुमान गर्न सकिन्छः पेट दुख्नु, पटकपटक ट्`वा`इलेट जानु, पि`सा`ब गर्ने बेलामा पि`सा`ब पोल्नु, पि`सा`बबाट र´ग`त आउनु, छटपटी हुनु, भोक नलाग्नु, ज्व`रो आउनु, आदि ।-इन्फो नेपाल
Prevमुला खाएपछि भुलेर पनि यी चीज नखानुहाेस् । पछुताउनु पर्ला !
Nextहाडजोर्नी दुखाई देखि माेटाेपन घटाउनका लागी अचुक औषधिकाे काम गर्छ डल्ले खुर्सानीले, यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु ।
प्रधानमन्त्रीलाई ब दनाम गर्न उद्यत सञ्चारमाध्यमको र बैया खे दपूर्ण : सचिवालय…हेर्नुहोस।